Wasiirka Arrimaha Dibedda Sacuudiga ayaa beeniyey warar ay baahiyeen warbaahinta qaar oo sheegayey in ra’iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu Axaddii socdaal qarsoodi ah ku tegay dalkaas, lana kulmay dhaxal-suge Maxamed Bin Salman.
“Waxaan arkay wararka warbaahinta ee ku saabsan kulan la sheegay inuu dhex-maray dhaxal-suge Maxamed Bin Salman iyo saraakiil Israa’iiliyiin ah intii lagu guda jiray booqashadii uu Pompeo. Wax kulan noocaas ah ma dhicin. Saraakiisha rasmiga ah ee joogtay waxay ahaayeen Mareykan iyo Sacuudiyaan,” ayuu yiri Amiir Faisal bin Farhan Al Saud oo qoraal soo dhigay twitter.
Warbaahinta Israel ayaa shalay ku warramay in ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu booqasho sir ah Axaddii ku tegay Saudi Arabia, halkaasi oo uu wada-hadallo kula yeeshay dhaxal-suge Mohamed bin Salman iyo xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo.
Warbixinada ayaa sheegay in wafdiga Israel uu ku jiray Yossi Cohen, oo ah madaxa hay’adda sirdoonka Israel ee Mossad.
Warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Saxnuuni.